त्रिविले आठ महिनापछि नियुक्ति गरेका आइओएम सहायक डिनहरू हाजिर हुन मानेनन्
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, साउन १०
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले एघारौं सत्याग्रह सुरु गरेकै दिन सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियुक्ति गरेका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का चार सहायक डिनले हाजिर हुन अस्वीकार गरेका छन्।
त्रिवि कार्यकारी परिषदले डा. राजेन्द्र गुरागाईं, डा. मधु देवकोटा, डा. द्वारिकाप्रसाद श्रेष्ठ र मन्दिरा शाहीलाई सहायक डिन नियुक्ति गरेको थियो। यी चारै जनाले चिठी लिइसकेको त्रिविले दाबी गरेको छ। उनीहरू भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्। नियुक्ति लिएको भनिएकामध्ये कसैले त्रिविको निर्णय नै थाहा नभएको बताए भने कसैले चिठी नबुझेको जानकारी दिए।
'मलाई त्रिविको निर्णय थाहा छैन, यसबारे छलफल पनि भएको छैन,' नियुक्ति पाएको भनिएका डा. गुरागाईंले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने।
आइओएम डिन डा. जगदीश अग्रवालले भने त्रिविले सहायक डिन नियुक्त गरेकाहरू हाजिर हुन नआएको पुष्टि गरे।
त्रिविले सोमबार डा. प्रताप नारायणलाई आइओएम क्याम्पस प्रमुख र अन्य चार जनालाई सहायक डिन नियुक्ति गरेको थियो। यी पद झन्डै आठ महिनादेखि रिक्त थिए।
यसअघि गत मंसिरमा केसी दसौंपटक सत्याग्रह बस्दा त्रिविले डा. अग्रवाललाई आइओएम डिन नियुक्त गरेको थियो। अन्य पदाधिकारी यथाशीघ्र नियुक्ति गर्ने भनिए पनि हालसम्म प्रक्रिया अवरुद्ध रहँदै आएको थियो। त्रिविले केसी अनसन सुरु हुने दिन पारेर यी नियुक्ति गरे पनि पूर्णकालीन भने छैन। क्याम्पस प्रमुखका रुपमा डा. पाठकलाई पूर्ण कार्यकालको निम्ति नियुक्ति दिइएको छ। सहायक डिनका हकमा भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागू गर्ने भनिएको छ। जबकि सहायक डिनको पदावधि चार वर्षको हुन्छ।
नियुक्ति पाएकाहरूले यही आधारमा निर्णय अस्वीकार गरेका हुन्। त्रिविको निर्णय अल्पकालीन भएकाले जतिबेला पनि निष्काशनमा पर्न सक्ने संशयले पद सम्हाल्न नमानेको स्रोतले बतायो।
त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले भने आइओएमले सिफारिस गरेका चारै जनाले चिठी बुझिसकेको दाबी गरेका छन्। ‘नियुक्ति अस्वीकार गरेको भन्ने हैन, उहाँहरू सबैले चिठी बुझिसक्नुभएको छ,’ खनियाँले सेतोपाटीसँग भने।
अग्रवालले चारै जनालाई गत चैत २५ गते नै सहायक डिन सिफारिस गरेका थिए। त्रिविले भने नियुक्ति दिन मानेको थिएन। राजनीतिक भागबन्डा नमिलाइकन सिफारिस गरेको भन्दै उपकुलपति खनियाँले नियुक्ति दिन मानेका थिएनन्।
आइओएम स्रोतका अनुसार उपकुलपति खनियाँले सिफारिसमा ‘नाम मिलाएर ल्याउनू’ भनी केहीको नाम दिएका थिए। डिन अग्रवालले खनियाँको दबाब अस्वीकार गर्दै आफूले पठाएको नाममा अडान लिएका थिए।
स्रोतका अनुसार डा. केसीले आइओएममा पदाधिकारी नियुक्ति माग राख्दै अनसन थालेपछि दबाब महसुस गरी त्रिविले हतार–हतार डिन नियुक्ति गरेको हो। भागबन्डा नमिलाई पठाइएको नाम पछि हेरफेर गर्ने सोचेर आइओएममा चारै जनालाई अस्थायी नियुक्ति दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
‘डा. केसीको एउटा माग पूरा गरेजस्तो गरी आइओएममा डिन नियुक्ति गरिएको छ, त्यस्तो अल्पकालीन नियुक्ति जतिबेला पनि संक्रमणमा पर्ने देखिन्छ,’ आइओएम स्रोतले भन्यो, ‘केसीले फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले डिनहरूले अस्थायी नियुक्ति ग्रहण नगरेको बुझिन्छ।’
गत मंसिरमा २२ दिन लामो अनसन तोड्दा केसी र सरकारबीच तीन महिनाभित्र आइओएममा क्याम्पस प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो। आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न डिन, क्याम्पस प्रमुख र पदाधिकारी खाली राख्दै त्रिविले आइओएमलाई राजनीतिक खेलमैदान बनाएको डा. केसीले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
पदाधिकारी नियुक्तिका अतिरिक्त व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने लगायत पुराना सम्झौता कार्यान्वयनसहित सातबुँदे माग राखी केसी अनसन बसेका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १०, २०७४, ०५:०४:४६